Etu esi eji Twitter bulie azụmahịa Ecommerce gị | ECommerce ozi ọma
Ị nwere ike - jiri Twitter mee ka azụmahịa ecommerce gị kwalite, Mana tupu nke a, ị ga-ebu ụzọ chọpụta ihe ị chọrọ ime na netwọkụ mmekọrịta a. I ghaghi ichefu nke ahu Twitter nwere asụsụ nke ya jiri aghụghọ nuances na hashtag ị chọrọ ịghọta.
1 Etu esi eji Twitter maka Ecommerce gị
2 Ọrụ ndị ahịa
3 Jikwaa Tweets mara mma ma na-adịghị mma
4 Nyochaa ahịa gị
5 Nyochaa asọmpi ahụ
Etu esi eji Twitter maka Ecommerce gị
Dị ka ihe niile Ecommerce azụmahịa, ịkwesịrị ịmalite iche echiche Twitter dị ka mkpesa gị na ndị ọrụ ndị ahịa. Iji nwee ihe ịga nke ọma, ị ga-ahụrịrị iji nyochaa nyocha niile nke akara gị na ntanetị mmekọrịta gị wee zaghachi ndị ahịa ọrụ pụrụ iche.
Jikwaa Tweets mara mma ma na-adịghị mma
Ọ bụrụ na ọ bụ Ezi tweet, ị ga-enyerịrị, wee zipu tweet ọzọ na ekele ị na-ekwupụta afọ ojuju gị maka ezigbo ahụmịhe ndị ahịa nwetara. Ọ bụrụ na ọ bụ Na-adịghị mma tweet, ezere ya, dozie nsogbu ahụ ozugbo ma nye azịza ya. Na-emeso mmekọrịta gị na Twitter dịka ị ga-eche ihu n'ụlọ, nwee nsọpụrụ, ịnụ ọkụ n'obi, na enyi.
Nyochaa ahịa gị
Netwọk mmekọrịta a dị mma maka ndị nwe ecommerce ndị na-achọ inweta ozi na-enye ha ohere ịkwalite azụmaahịa ha n'ịntanetị. Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-ere igwe kwụ otu ebe, mee otu Nnyocha Twitter iji isiokwu iji chọta ndị ọrụ na-ekwu banyere igwe kwụ otu ebe. Ihe a na-emewanyewanye a onye ọrụ na TwitterNke ka mma, ị ga-atụlekwa ndị ọrụ ahụ, ọ bụ ezie na ha nwere ike inwe ndị na-eso ụzọ ole na ole, ka nwere ike ịzụta ya.
O yikarịrị ka nke gị ndị asọmpi na-eji Twitter ma ya mere ọ dị mma ka ị mụta site n ihe ha na-eme nke ọma, yana site na ọdịda ha. Chọpụta otu ha si mesie ike uru ha bara, otu ọnụ ahịa ha siri dị ka nke gị, ihe foto na nkọwa ha si dị ka saịtị ha kachasị maka mkpanaka, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » elekọta mmadụ media » Etu esi eji Twitter bulie azụmahịa Ecommerce gị
Etu esi ebuli edemede na Magento maka SEO Ecommerce kacha mma